Boomtrain: Ejiri ọgụgụ isi rụọ maka ndị na-ere ahịa | Martech Zone
Tuesday, August 25, 2015 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 30, 2015 Jenn Lisak Golding
Dị ka ndị ahịa, anyị na-anwa ịnakọta ọgụgụ isi mgbe niile gbasara omume ndị ahịa anyị. Ma ọ bụ site na inyocha Google Analytics ma ọ bụ ile anya ngbanwe usoro, ọ ka na-ewe oge dị ukwuu maka anyị ịgafe akụkọ ndị a ma mee mmekọrịta ziri ezi maka nghọta bara uru.
Amụtara m ihe na nso nso a Ụgbọ njem site na LinkedIn, o mere ka m nwee mmasi. Boomtrain na - enyere aka ikwukọrịta okwu nke ọma na ndị ọrụ ha site na ịnye 1: 1 ahụmịhe nke onwe onye nke na - eme ka mmekọrịta dị omimi, njigide ka ukwuu, ma nwekwuo uru ndụ. Ha bụ akwa ọgụgụ isi nke na - ebu amụma maka ọdịnaya kachasị maka ozi ịntanetị gị, weebụsaịtị gị na ngwa mkpanaka gị.
N'ụzọ bụ isi, ha na-enyere ndị ahịa aka ikpezi 5 W:
Ònye: rute onye kwesiri ekwesi
Kedu: nwere ọdịnaya ziri ezi
Mgbe ole: n'oge kwesịrị ekwesị
ebe: kachasị maka ọwa ọ bụla
mere: ma ghọta isiokwu na ndị ọkwọ ụgbọ ala gburugburu ọdịnaya na omume onye ọrụ
Ihe Ha Na-eme
Boomtrain na-elekwasị anya na nguzosi ike n'ezi ihe data, nyocha, na nghọta gafee isi mmalite data isi abụọ maka ndị ahịa ọ bụla:
Ha na-anakọta omume nke onye ọrụ ọ bụla, mara ma ọ bụ na-amaghị aha ya wee wuo mkpịsị aka dijitalụ pụrụ iche nke onye ọ bụla.
N'otu oge ahụ, Boomtrain na-enyocha ọdịnaya niile nke onye ahịa na ọkwa omimi miri emi iji ghọta ụdị ọdịnaya ọ bụla dị ka uche mmadụ ga-esi, na-eme njikọ n'ofe isiokwu, edemede, na usoro.
Iji ihe ndị a na isi mmalite data, ọgụgụ isi igwe Boomtrain nwere ike ịmepụta ahụmịhe ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike na 1: 1 n'ogologo ọtụtụ ọwa site na ijere ọdịnaya onye ọ bụla nwere ike hụ n'anya ma kesaa.
Ndị Ha Na-enyere Aka
Ezigbo ndị ahịa ha bụ ndị na-ebipụta akwụkwọ na ndị na-ere ahịa ọdịnaya na-ewepụta ọdịnaya dị iche iche na-agbanwe agbanwe, ma mgbe niile na-echekwa oge. Igwe ọgụgụ igwe na-arụ ọrụ nke ọma karịa data o nwere - ndị ahịa ha na-eziga ma ọ dịkarịa ala ozi-e 250,000 kwa ọnwa (ọtụtụ ozi ịntanetị ezigara na ọnwa ahụ na nnukwu ndị debanyere aha ha) Gbanyere na ha na-enwe okporo ụzọ na saịtị ha.
Lelee Ebe nrụọrụ weebụ Boomtrain ịmụtakwu ihe.
Tags: ụgbọ alacontent Marketingnyocha dataihe omuma datadata iguzosi ikeemailkeonweọdịnaya ọdịnayaamụma ibu
Omume na-agbanwe na B2B Ọdịnaya Marketing (yana Statistics)